सपनामा शारीरिक सम्पर्क गरेको देख्नुहुन्छ ? निकै खतरनाक हुन सक्छ – MeroJilla.com
सपनामा शारीरिक सम्पर्क गरेको देख्नुहुन्छ ? निकै खतरनाक हुन सक्छ
एजेन्सी। मानिसहरुले विभिन्न किसिमका सपना देख्ने गर्छन् । यीमध्ये केही सपनाको खास अर्थ हुन्छ । केही सपनाको भने उतिसारो महत्व हुँदैन । यदि सपनामा शारीरिक सम्पर्क गरेको देखियो भने यसको फरक फरक अर्थ हुन सक्छ ।
यस्तो सपनाको अर्थ यो कुरामा निर्भर गर्छ कि तपाइँको पार्टनर को हुन्छ ? यदि तपाइँ सपनामा अपरिचित व्यक्तिसँग शारीरिक सम्पर्क गरेको देख्नुहुन्छ भने तपाइँको दाम्पत्य जीवन खतरामा हुन सक्छ । किनकि यस्तो सपनाको अर्थ हुन्छ तपाइँ आफ्नो पार्टनरसँग सन्तुष्ट हुनुहुन्न । ज्योतिष शास्त्रका अनुसार यदि तपाइँ पुरुष हुनुहुन्छ र कुनै महिलासँग शारीरिक सम्बन्ध राखेको देख्नुहुन्छ भने तपाइँ गम्भीर रोगबाट पीडित हुनुहुन्छ । सपनामा रातो सारी लगाएकस् महिलालाई अंकमाल गरेको देखिएमा मृत्युको खतरा हुन्छ । पहेंलो आँखा भएकी महिलालाई अंकमाल गरेको देख्दा निकै कष्ट सहनुपर्ने हुन सक्छ । सपनामा कुनै युवती नाचिरहेको देख्नुभयो भने तपाइँको प्रेम सम्बन्ध ब्रेकअप हुन सक्छ ।